काबुलकाे आत्मघाती विस्फाेटमा कति परे नेपाली ? – Nepal Journal
काबुलकाे आत्मघाती विस्फाेटमा कति परे नेपाली ?
Posted By: Nepal Journal May 31, 2017 | १७ जेष्ठ २०७४, बुधबार १७:२३
अफगानिस्तान। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा बुधबार बिहान कूटनितिज्ञ व्यक्तित्वहरुको आवासस्थानलक्षित भएको एक भीषण आत्मघाती आक्रमणमा परी कम्तीमा ६४ जनाको मृत्यु भएको अफगान गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यसगरी उक्त घटनामा ५ जना नेपाली सहित ३ सय जना घाइते भएका छन् । घाइते भएका नेपालीहरूकाे पहिचान खुलेकाे छैन ।
यस आक्रमणमा परी महिला र बालबालिकासहित ३२० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । आत्मघाती आक्रमणकारीले विस्फोटन पदार्थले भरिएको एक सवारी साधानलाई स्थानीय समयाअनुसार ८ः३० बजे बुधबार विहान जान्बाक स्क्वायरस्थित बिस्फोट गराइएको बताइएको छ ।
यस विस्फोटको कारण ५० भन्दा बढी सवारी साधन ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भएको समाचार उल्लेख छ । रासस÷एएफपी
Be the first to comment on "काबुलकाे आत्मघाती विस्फाेटमा कति परे नेपाली ?"